Downloads 8 571
Mpanoratra: Nick Needham, Brett Hoskins
Rosiana fitaterana orbital fiaramanidina ho an'ny asa fitoriana. Mamela ny fitaterana ny Rosiana mivezivezy faritra. Misy amin'ny 4 repaints samihafa. Tandremo ny amin'ny solika sy ny lanjan'ny entana. Ataovy ny mikopaka 3 notches. Setroka vokatra sy ny feo no tonga lafatra.
Ny VMT Myasishchev 0GT Atlant dia Variant ny M4 Myasishchev Molot baomba ampiasaina ho toy ny stratejika airlift fiaramanidina. Ny VM-T tamin'ny farany mba hitondra balafomanga soso sy sovietika Buran sambon-danitra fandaharana. Tsy dia fantatra koa amin'ny hoe ny 3M-T.